जसको बागडोर मताधिकार प्रयोग गर्ने दिनसम्मका लागि नेपाली जनतामा छ ।
नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन राजनीतिक परिवर्तनपछिको राज्यसत्ताको विधिसम्मत रूपान्तरण हो । जसमा देशले एकैपटक ठूलो संख्यामा झन्डै एक हजारको हाराहारीमा देशको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि पाउँदै छ, जसको बागडोर मताधिकार प्रयोग गर्ने दिनसम्मका लागि नेपाली जनतामा छ । निर्वाचनपश्चात् त्यो अधिकार जनप्रतिनिधिमा पुग्नेछ ।
१० र २१ मंसिरको निर्वाचनमा आमनेपाली मतदाताले गर्ने मतदानले देशको भाग्य निर्माण गर्नेछ । त्यसैले पनि यस विषयमा मतदाताले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । यसपटकको मतदानले देश विकास हुने–नहुने, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघ र प्रदेशको भूमिका आदिबारे गम्भीर प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नेछ ।
आगामी दिनमा हामी मतदाताले चुनेका प्रतिनिधिबाट कति मात्रामा देशप्रतिको सेवा प्रतिबिम्बित हुनेछ, त्यो मनन गरी मतदान गरौँ । देशप्रतिको जिम्मेवारीमा हाम्रो भूमिका के छ, केवल नेता वा दललाई सत्तोसराप गरेर हामी जनताको जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पूरा हुँदैन । यो पूरा गर्न आफ्नो मताधिकार तथा अन्य मतदाताको मताधिकारलाई सही सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । यो जिम्मेवारी सही किसिमले पूरा गरेमा कहिले उत्तर र कहिले दक्षिणतर्फ फर्केर गाली गर्ने स्थिति आउनेछैन ।
मतदाताले पैसा, खाना, भोज–भतेर, लुगा, कपडा, टिसर्ट, टोपी, जागिर लगाउने आश्वासन, झुटा फोस्रा कुरा, डर, धाकधम्की, त्रासमा नपरी मतदान गरेमा देशले सही नेतृत्व पाउनेछ । मतदान गोप्य हुने भएकाले कुनै दल उम्मेदवार व्यक्तिसँग डराउनु आवश्यक छैन । मतदानमा विचार पुर्‍याइएन भने देश अन्धकारतिर जानेछ र हामी नेपाली जनता सधैँ रैती, बिचरा, निमुखा र भोट बैंक मात्र बन्नुपर्नेछ ।
नीतिप्रधान वा नेताप्रधान भन्ने विषयमा मनन गर्दा देशका ठूला मूल धारकै पार्टीमा विचलन देखिएको घोषणापत्रबार्ट प्रस्ट भइसकेको छ । तर, तिनै दलमध्ये एउटा राम्रो छान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । यद्यपि मताधिकार प्रयोग गर्दा मतदाताले विवेक भने पु¥याउनैपर्छ । हामीले विगत हेरेर समीक्षा गर्नुपर्छ । के–कति कारणले नेपालमा विकास हुन सकेन त ? यो विषय केलाउँदा हामीले जिताएर पठाएकाहरूले संसद्मा गएर हाम्रो मतको सम्मान गरे या गरेनन् ? संसद् बैठकमा निदाउने, बैठकमा नजाने, भूकम्प, बाढीजस्ता राष्ट्रिय विपत्तिका वेला हराउने, जनतालाई सहयोग नगर्ने, जितेर सहर पसेपछि मतदातामाझ नफर्किने, सदरमुकामबाट गाउँ नजाने, विकास निर्माणमा चासो नराख्ने, विकास निर्माणको पैसा हिनामिना गर्ने नेताहरूले हाम्रो भोट पाएका थिए कि ? यस्ता पक्षमा पनि हामीले मतदानअघि ध्यान दिनैपर्छ ।
आजको समयमा सबै दलले प्रजातन्त्र अँगालेकाले अब निरंकुशताको डर छैन । तथापि दलहरू स्वेच्छाचारी भइरहेको अवस्थाको समाधान हाम्रो विवेकपूर्ण मतदान मात्र हो । पार्टी नेताहरूलाई तह लगाउने मौका भनेकै यही निर्वाचन हो । ०४६ देखि नै हामी मतदाताबाट निरन्तर गल्ती भइरहेको छ । जसका कारण हामी प्रताडित छौँ । नेपालमा जसरी जनता पिसिएका छन्, त्यसका कारक मूल प्रवाहका ठूला भनिने दल नै हुन् । यस्ता दलको म नै राज्य हुँ भन्ने अहंकारले गर्दा मुलुकको यो दुर्दशा भएको छ । तर, अबका दिनमा देश सुधार्ने अभियान पनि यिनै तीन दलबाट मात्रै सम्भव छ । अब साँच्चै मुलुकलाई धेरै चोइटिएका दलभन्दा जिम्मेवार सीमित दल मात्र आवश्यक छ ।
धेरैपटक चुनावमा जितिसकेको र काम नगरेका पुराना नेता पार्टीलाई भोट दिनुभन्दा नवीन विचार बोकेका पार्टी र नेतालाई मतदान गर्नु मतदाताको धर्म हो । पुराना नेतालाई उनीहरूको पार्टीमै थन्क्याउँदा बेस हुन्छ । नयाँ नेपाल भएर पनि अझै ठालु बन्ने, जनतालाई हेप्ने, धन, पद, शिक्षा र पहुँचको अहंकार बोकेका नेतालाई पार्टीले टिकट दिएको छ भने तिनलाई हामी मतदाताले नै ठेगान लगाउन सक्नुपर्छ ।
प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने अनि आफ्नो कुरा मात्र लाद्ने, गरिबको नाम लिने सामन्तीको रखबारी गर्ने, आफूलाई युगान्तकारी परिवर्तनको ठेकेदार ठान्नेहरू अब तिरष्कृत हुनुपर्छ । स्वयंमा परिवर्तन गर्न नसक्ने या नचाहने दल र नेताबाट देशको समृद्धि सम्भव छैन । निर्वाचनको समयमा यी दलका उम्मेदवारलाई सुध्रिने र सच्चिने एउटा अर्को मौका त दिन सकिन्छ तर, तिनले भोलिका दिनमा विगतका जस्तै भूमिका खेले जनताले नै कठोर सजाय पनि दिन सक्नुपर्छ । अब पनि हामीले साना दल र तिनका उम्मेदवारलाई मत दियौँ भने देशलाई पुनः अकंगणितीय राजनीतिको खेलमा लैजान सहयोग गरेको ठहरिनेछ ।
हामीले देशको आवश्यकता र यथार्थलाई मनन गर्ने हो भने अब ठूला दल र तिनका उम्मेदवारलाई नै मत दिनुपर्छ । किनकि, साना दललाई मत दिएको खण्डमा देशमा पुनः खिचडी सरकार गठन हुनेछ । तर, हामीले ठूला दलमाथि विश्वास गरेर मत दिने हो भने स्थिर सरकार बन्न सछ । यस्तो सरकारले मात्र देशमा समृद्धिको लहर ल्याउन सक्छ ।